နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်များနည်းတူ မြန်မာနိုင်ငံရှိတက္ကသိုလ်များတွင် မိုဘိုင်း App ဖြင့်စက်ဘီးငှ?? - Yangon Media Group
နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်များနည်းတူ မြန်မာနိုင်ငံရှိတက္ကသိုလ်များတွင် မိုဘိုင်း App ဖြင့်စက်ဘီးငှ??
ရန်ကုန်၊ ဧပြီ ၈- နိုင်ငံတကာ တက္ကသိုလ်များနည်းတူ မြန်မာနိုင်ငံရှိ တက္ကသိုလ်ဝင်းများအတွင်း မိုဘိုင်း App ဖြင့် စက်ဘီးများငှားရမ်း စီးနင်းနိုင်သော စနစ်များ ဖြစ်ပေါ်လာရန်နိုင်ငံတော်၏ ပံ့ပိုးမှုနှင့်ရင်း နှီးမြှုပ်နှံသူများ၏ စိတ်ဝင်စားမှုများ လိုအပ်နေဆဲဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
ဧပြီ၈ရက်တွင် Auston College Myanmar တွင်ပြုလုပ် သော ”တက္ကသိုလ်အတွင်းစက်ဘီး မျှဝေသုံးစွဲခြင်းယဉ်ကျေးမှုအနာဂတ်ကို အတူတကွစိတ်ကူးတည်ဆောက် ခြင်းအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ”မှ သိရ ခြင်းဖြစ်သည်။
”တက္ကသိုလ်တွေမှာ စက်ဘီး တွေနဲ့တက္ကသိုလ်ကို ဖော်ဆောင် နိုင်ဖို့ရာအစိုးရကနေပြီးတော့ အများ ကြီးထောက်ပံ့ပေးဖို့လိုပါတယ်။နိုင်ငံ တော်အစိုးရက ထောက်ပံ့ပေးမှသာ ပြည်ပကရော ပြည်တွင်းကစီးပွား ရေးလုပ်ငန်းရှင်များကပါ လာရောက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ်လို့ ကျွန်တော်ယုံ ကြည်ပါတယ်”ဟု မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစီမံချက်တွင်ပါဝင်သည့် ဦးဇော်လင်းနိုင်က ဧပြီ ၈ရက်ကပြောသည်။
ယင်းစနစ်သည် မကြာမီ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပေါ်ထွန်းလာမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံရှိ အာဆီယံ နည်းပညာတက္ကသိုလ်ရှိ စက်ဘီးငှားရမ်းသည့် စနစ်များ အကြောင်းကိုလည်း တက်ရောက်လာ သည့်ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ များကို ရှင်းလင်းပြောပြခဲ့သည်။
လက်ရှိအချိန်တွင်မြန်မာနိုင်ငံတွင် တက္ကသိုလ်ဝင်းများသည် ကျယ်ဝန်းသဖြင့် စာသင်ဆောင်များကို သွားလာသင်ယူရန်ခက်ခဲခြင်း၊ ကားဂိတ်နှင့်စာသင်ဆောင်များ အလှမ်း ဝေးနေခြင်းများ ကြုံတွေ့နေရသ ဖြင့် ကျောင်းသားများဦးဆောင် ပါဝင်သော Bikes in yangon အဖွဲ့မှတက္ကသိုလ်များတွင် စက်ဘီးစီးသင်တန်းများနှင့် စက်ဘီးငှားရမ်းခြင်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ ကြောင်းသိရသည်။
”Bikes in yangon ကတော့ ၂ဝ၁၇ခုနှစ်လောက်မှာ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာ စက်ဘီးငှားမယ်ဆို ပြီးတော့စတင်ဖွဲ့ခဲ့တာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ကံမကောင်းတာလားမသိဘူး။ ကျွန် တော်တို့ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာ လုပ်ခွင့်မရခဲ့ဘူး။ ရေကြောင်းတက္ကသိုလ်နဲ့ ဒဂုံတက္ကသိုလ်မှာ လုပ်ခဲ့တယ်။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာ လုပ်ခွင့်မရတဲ့အတွက် စက်ဘီးစီးသင်တန်းတွေကို လုပ်ခဲ့တယ်။ ပထမအနေနဲ့ဘာကြောင့် စက်ဘီး အငှားစနစ် ဘာလို့လိုအပ်လဲဆို တာကပြောချင်တယ်။ ရန်ကုန်မြို့မှာကားတွေပိတ်နေတယ်။ တစ်နေရာနဲ့တစ်နေရာရွေ့ဖို့ ခက်နေတယ်။ ကားပိတ်တယ်။အဲဒီတော့ ကျွန်တော် တို့အနေနဲ့ စက်ဘီးစသုံးကြည့် မယ်ပေါ့။ ရန်ကုန်မှာ စက်ဘီးတွေ သုံးဖို့အားလုံးမေ့နေကြတယ်။အခု ကျွန်တော်တို့ တက္ကသိုလ်တွေမှာ စခဲ့တယ်။ ရန်ကုန်ကလေထုညစ် ညမ်းမှုဆိုးရွားလာတာများလာပြီ။အဲဒီအတွက် စက်ဘီးကလေထု ညစ်ညမ်းမှုကိုလျှော့ချနိုင်မယ်ပေါ့။ အဲလိုမျိုးနဲ့စဖြစ်ခဲ့တယ်။ စုစုပေါင်း စက်ဘီး၉ဝနဲ့စထားပါတယ်။ နိုင်ငံတကာမှာလို မိုဘိုင်းဖုန်းကနေတစ်ဆင့် QR Code တွေကို Scan ဖတ်ပြီး သော့ဖွင့်လို့ရတာတွေ၊ လမ်း ကြောင်းတွေကို app ကနေကြည့်လို့ရတာမျိုးတွေတော့ နောင်တစ်ချိန်မှာဖြစ်လာမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အချိန်အတိအကျတော့ မပြောနိုင် သေးပါဘူး” ဟု Bikes in Ygn က Operation Manager မောင် ထက်ဘုန်းမြတ်နိုင်ကပြောသည်။
တိုက်ပွဲများ ထရီပိုလီမြို့တော်အနီးရောက်လာ၍ အမေရိကန်စစ်တပ်များ လစ်ဗျားမှ ရုပ်သိမ်း
ဗိုလ်လုပွဲတွင် ဂိုးပေါက်ကို ဂိုမက်စ်ဆက်တာဝန်ယူရန် ဖော်စတာထောက်ခံ
အမြန်လမ်းတွင် ကျောင်းထိုင်ဆရာတော် မောင်းလာသည့်ယာဉ် အရှိန်မထိန်းနိုင်ဘဲ ဘူးကွဲချောင်းထဲသို့ ထိုးကျ
မြိတ်ဒေသထွက် တညင်းသီးများ အထွက်နှုန်း ကောင်းနေသော်လည်း ဝယ်လိုအား မရှိသည့်အတွက် ဈေးကွက်ပျ??
ဒီချုပ်ဒုတိယအကြိမ်ညီလာခံတွင်တင်သွင်းသော ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးပါ?
ကချင်ပြည်နယ်တွင် ရေကြီးမှုကြောင့် အခြေခံပညာကျောင်း ၄ဝ ကျော်ပိတ်ထားရ